I-19 YE-IVY LEAGUE YEENWELE EZIDALA ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Inwele ye-Ivy League
Inwele ye-Ivy League ngumahluko okrelekrele wabasikiweyo. Eyaziwa ngokuba yiHarvard okanye iPrinceton yokucheba iinwele, i-Ivy League cut is a combination of crew…
Inwele ye-Ivy League ngumahluko okrelekrele wabasikiweyo. Eyaziwa nangokuthi yiHarvard okanye iPrinceton yokucheba iinwele, ukusika i-Ivy League kukudityaniswa kweenwele ezimfutshane zabasebenzi kunye nenxalenye esecaleni, isitayile esitshayelwe ecaleni. Ekugqibeleni, iinwele zamadoda ze-Ivy League yimbonakalo egqibeleleyo yamakhwenkwe afuna isitayile esiqhelekileyo, kodwa esididi.
Ukuba unomdla wokwazi ngale nwele yanamhlanje kwaye ufuna ukubona eyona mizekelo ilungileyo ye-Ivy League isebenza, isikhokelo sethu siya kukunceda ufumane oku kujonga kwi-barber. Nokuba ufuna i-Ivy League emfutshane okanye ende esikiweyo phezulu idityaniswe nefade okanye i-taper emacaleni, nazi ezona zinwele zilungileyo ze-Ivy League zamadoda zokuba afumane ngoku.
1Yintoni i-Ivy League Haircut?
MbiniUngayisika njani i-Ivy League Haircut
3UngayiTayile njani i-Ivy League yokucheba iinwele
4Ezona Nwele ziLungileyo zeIvy League
4.1Amacandelo amafutshane e-Tapered + kwi-Messy ephezulu
4.2Ukuphela kweTaper Taper + yabasebenzi abasikiweyo
4.3Icala elitshayelwe Ivy League
4.4I-Stick Crew Sika + i-Scissor Sika iiCala kunye noMva
4.5Isicatshulwa se-Ivy League Sika
4.6Mfutshane Spiky Ivy League
4.7Amacala amade + Izinwele eziMiselweyo
4.8Ixesha elide le-Ivy League + Icala elitshayelwe ngomphetho + iindevu
Yintoni i-Ivy League Haircut?
Inwele ye-Ivy League isikwe nje ngendlela efanayo nokusikwa kweqela. Nangona kunjalo, iPrinceton yokucheba iinwele iyazahlula ngokushiya iinwele ngaphezulu entloko, ivumela amadoda ukuba ahlukane kwaye atshaye iinwele zawo ecaleni. Ukuthintela ukusika iinwele zakho zimfutshane kakhulu, umchebi wakho uya kusebenzisa isikere endaweni yeziqhiki xa unciphisa iinwele ngaphezulu.
Ngenxa yesitayile sayo esibukhali, esicocekileyo nesobungcali, ikliphu yeHarvard yenzela iinwele ezinkulu zeshishini. Ngaphaya koko, abafana beekholeji bayayithanda i-Ivy League esikiweyo ngenxa yesitayile sayo esilula, esisezantsi esihamba nayo nayiphi na inkangeleko okanye impahla.
Ungayisika njani i-Ivy League Haircut
Kuba i-Ivy League cut isoloko ilifutshane iinwele zamadoda, kulula ukufumana. Inwele ifuna kuphela malunga ne-intshi okanye ezimbini zeenwele ngaphezulu kwaye mhlawumbi iphele emacaleni. Sincoma kakhulu ukutyelela indawo yakho yokucheba iinwele ubuncinci ubuncinci i-intshi ezi-2 xa uzama ukufumana iinwele ezimfutshane ze-Ivy League; nangona, unokuhlala uzama ukusika ixesha elide okunokufuna ii-intshi ezintathu zeenwele ukusebenza nazo.
Uya kudinga imveliso esemgangathweni yeenwele ngeenjongo zesitayile. Sincoma i-pomade, i-wax okanye i-putty ye-matte ecocekileyo okanye ukugqiba okuphezulu kokuqaqamba.
Xa uxoxa ngesitayile se-Ivy League kunye ne-barber yakho okanye i-stylist, kuhlala kuluncedo ukuba nomfanekiso, ke qiniseka ukuba ubhukumaka eli phepha okanye ugcine umfanekiso wokusika okuthandayo. Ukuba kufuneka uchaze indlela ofuna ukuba iinwele zakho zichetywe ngayo, ezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uxoxe ngazo zezi:
ukuba mfutshane kangakanani umphezulu,
uhlobo lokuphela olufunayo emacaleni nasemva,
kwaye ufuna ukushiya ixesha elingakanani
Khumbula, iinwele ezinde ngaphambili ziya kukunceda uhlambe umva okanye ukwahlula iinwele zakho, elona candelo libalulekileyo leenwele ze-Ivy League.
Ngokubhekisele kumacala nangasemva, uhlobo lokufiphala olukhethayo (phezulu kunye nophantsi kunye nenkqayi) kunye nobude beenwele ozishiyayo konke malunga nesimbo sakho. Sincoma iinwele ezimfutshane emacaleni, ke cela i-barber yakho ukuseta i-clipper ye- # 1 kuye ku- # 4.
i-fade ephezulu yekama ngaphezulu
UngayiTayile njani i-Ivy League yokucheba iinwele
Kuba i-Ivy League ilondolozo olusezantsi, iinwele ezimfutshane zamadoda, kulula kakhulu ukuba nesitayile. Ukwenza isitayile sokusikwa kwe-Ivy League, sebenzisa imveliso yeenwele kwaye usebenzise ikama okanye iminwe yakho ukwenza icala, ibrashi, okanye ibrashi umva. Unokukhetha nokushiya iinwele ezingcolileyo ngaphezulu kobume bendalo. Ekugqibeleni, ukwenza isitayile sokucheba iinwele ze-Ivy League kunokuba yenye yeenwele ezilula onokuze ube nazo!
Ezona Nwele ziLungileyo zeIvy League
Ukuba unomdla wokujonga ngakumbi iinwele ze-Ivy League zamadoda, siqokelele ingqokelela efanelekileyo yokusika kunye nezitayile ezingezantsi, kwaye siyathemba ukuba uza kufumana isitayile esifutshane okanye esifanelekileyo esifanelekileyo kuwe!
Amacandelo amafutshane e-Tapered + kwi-Messy ephezulu
Ukuphela kweTaper Taper + yabasebenzi abasikiweyo
Icala elitshayelwe Ivy League
I-Stick Crew Sika + i-Scissor Sika iiCala kunye noMva
Isicatshulwa se-Ivy League Sika
indlela yokufumana inyanga yelanga kunye nophawu oluphumayo
Mfutshane Spiky Ivy League
Amacala amade + Izinwele eziMiselweyo
Ixesha elide le-Ivy League + Icala elitshayelwe ngomphetho + iindevu
iinwele zobude obuphakathi zamadoda
iinwele zenkwenkwe zamantombazana
isitayela seenwele ezithambileyo